C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay cida maalgelisay Mashruuca Baxnaano ee Madaxweynaha daah-furay - Jowhar Somali Leader
Home Somali C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay cida maalgelisay Mashruuca Baxnaano ee Madaxweynaha daah-furay
C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay cida maalgelisay Mashruuca Baxnaano ee Madaxweynaha daah-furay
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ka daba-yimid warkii Madaxtooyada Villa Somalia ay faafisay ee ahaa mashruuca Baxnaano oo uu Madaxweynaha daah-furay, kaasoo qorshihiisa yahay in lagu taakuleeyo dad gaaraya 1.3 milyan oo qof oo ah dadka danta yar.
C/raxmaan C/shakuur ayaa wax laga naxo ku tilmaamay in Madaxweynaha uu ka run shegei waayo Mashruuca Baxnaan cida maalgelisay, isagoo ahaa mashruuc sanado badan soo socda oo ay wadeen Hey’addo ka tirsan Qaramada Midoobey.
“Waa wax laga naxo in madaxweynihii dalka uu kari waayo in uu ka run sheego mashruuca Baxnaano ee uu shalay daah furay. Mashruuca oo sanado soo socday waxaa deeqdiisa leh Baanka Aduunka, fulintiisana haydaha WFP iyo UNICEF, maamulkiisa kore ayaa lagu maamusay dowlada Soomaaliya, waxaana loogu tala galay in lagu gacan qabto dadka ay abaaraha, fatahaadaha webiyada iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga cayrteeyeen oo ay dalagii iyo xoolahii noolaa ka baabi’iyeen ka dibna xeryaha qaxootiyada galay, si ay noloshoodii dib ugu laabtaan oo saboolnimada looga saaro”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
C/raxmaan C/shakuur ayaa soo qaatay hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay munaasabadda daah furka mashruucaas oo ahaa in Madaxweynuhu markii u horeysay ku sheegay deeq ay dowladdu dadkeeda gaarsiiso, balse uu dafiray runta iyo xaqiiqada mashruuca.
Ugu dambeyn waxaa uu tilmaamay in Hoggaanka siyaasadda laga rabo inuu dadkiisa runta u sheego, una daacad waramo, si kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladda u kabco, iyo aaminaada muwaadinka u haayo hoggaanka dalka.